मानव जीवन नरहे बैंक किन चाहियो ? - Wnepal.com
सुरेन्द्र भण्डारी, सीइओ कुमारी बैंक लिमिटेड
साेमबार, चैत्र २४, २०७६
सुरेन्द्र भण्डारी नेपाली बैकिङ्ग इतिहासमा चिनाई राख्नु पर्ने नाम पटक्कै होइन । बैकिङ्ग इतिहासमा ३ दर्शक विताएका भण्डारी मिडियामा देखा पर्न त्यति रुचादैनन् । कुमारी बैंक बनाएर सिद्धार्थ बैंक पुगेपछि फेरि भण्डारी कुमारी बैंकमा फर्किए पछि कुमारी बैंक साच्चै भन्नुपर्दा मजबुद र अब्बल बैंक बनेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन ।
भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको कुमारी बैंकले ल्याएका बीमा र डिपोजिटका प्रोडक्ट राम्रै बजार पाएको देखिन्छ । नेपालको धेरै शाखा, एटिएम र ग्राहक भएको कुमारी बैंकका सीइओ हुन सुरेन्द्र भण्डारी ।
विश्वभरी महामारीकारुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाल पनि अछुतो छैन । केही संकेतहरु देखिएका छन् । चैत्र २५ गतेसम्मका लागि सरकारले देशलाई लकडाउन गरेको अवस्था विद्यमान छ । लक डाउनका कारण सरकारको अनुमति विना घर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नै छैन ।
यो अवस्थामा पनि नेपालको निजी क्षेत्रको ठूलो कुमारी बैंक लिमिटेडले सेवा प्रदान गरिरहेको देखिन्छ । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन दिएको कुमारी बैंकले डिजिटल कारोबार गर्न नसक्ने ग्राहकलाई कारोबार सुचार गर्न केही शाखाहरु संचालन गरि सेवा दिइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंक खोलेर सेवा दिन के कस्ता कठिनाईहरु छन् ?
शाखा खुलेको मात्रै छ कि कारोबार छ । बैंकको कर्मचरीको अवस्था कस्तो छ । कोरोना भाईरसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्ने देखिन्छ र आगामी चैत्र महिनामा आउने बैंकहरुको वित्तिय विवरणमा यसले कस्तो असर गर्ने देखिन्छ र कारोना बिरुद्ध लड्ने राज्य कोषमा कुमारी बैंकले के कस्तो राहत दिएको छ । यिनै र यस्ता विषयमा पुराना बैंकर एवं कुमारी बैंक लिमिटेडका सीइओ सुरेन्द्र भण्डारीसंग भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानीः
० सीइओ साव यो विषम र अप्ठ्यारो अवस्थामा कुमारी बैंकले ग्राहकहरुलाई कस्तो सेवा दिएको अवस्था छ ?
हामीले केही लिमिट शाखा खोली सेवा दिएका छौं । प्रत्येक जिल्ला १/२ वटा शाखा सञ्चालन गरेको अवस्था चाहि छ । हाम्रो बैंकको डिजिटल बैकिङ्ग सुविधा छन् ।
यी सूचना प्रविधीबाटै ग्राहकहरुले डिजिटल बैकिङ्गका कारोबार ग्राहक वर्गले घरबाटै गर्नु भएको तथ्याङ्कले प्रस्ट पारेको छ । तपाईलाई थाहा छ । मोबाइल बैकिङ्ग ल्याउने नेपालकै पहिलो बैंक कुमारी बैंक हो । कारोबार कम छ । ग्राहकको संख्या छैन । अत्यावश्यक भित्र पर्ने राहतका सामाग्री खाद्यान्न, औषधीका एलसीका कारोबार पनि केही भएकै छन् । परिस्थिति अनुसार नै चल्नुप¥यो नि ।
० यो कोरोना भाईरसको महामारीमा पनि जीवनलाई जोखिममा राखी काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य अवस्था बारे कत्तिको चिन्तित रहनु भएको छ ?
राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । यसबारेमा धेरै सोच विचार गरेका छौं । कर्मचारी र गार्डहरुलाई खानाको व्यवस्था बैंकलेनै गरेको छ । कर्मचारी भाईबहिनीहरुको स्वास्थ्य सबै भन्दा ठूलो कुरा हो । यसका लागि चाहिने सबै स्वास्थ्यका सामग्री उपलब्ध छन् । सिमित शाखा खोलेका कारण कम कर्मचारी काममा छन् । अरुले घरबाटै डिजिटल प्रविधि मार्फत काम गरेको अवस्था छ ।
० यस्तो महामारी भएका बेला शाखा खोली काम गर्ने कर्मचारीलाई के कस्ता सहुलियतका प्याकेज ल्याउनु भएको छ नि ?
कर्मचारी साथीहरु बैंकका पुँजी हो । उहाँहरुको बारे हामी नेतृत्व चनाखो छौं । केही सहुलियतका जस्तै भत्ता दिने इन्स्योरेन्स फुल गरिदिने । महत्वपूर्ण कुरा बारे छलफल गर्दैछौं । केही दिनमै निर्णय गर्ने छौं नि ।
० राज्यले स्थापना गरेको कोरोना विरुद्ध लड्ने कोषमा चाहि कस्तो सहयोग दिनु भएको छ, सीइओ साब ?
हाम्रो कुमारी बैंकले राज्यलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छौं । हामीले ७ वटै प्रदेशमा १०/१० लाख दिइसकेको छौं । अब यसले नपुग्ने देखिन्छ । त्यसकारण सञ्चालक समितिको बैठक गरि थप राहत दिने निर्णय हामी चाडौं ल्याउने छौं ।
अर्को कुरा यो कति लम्बिने हो र नेपालमा कस्तो क्षती कुने हो त्यो हेरेर हामी अगाडी बढ्ने छौं । हामी जहिले पनि सरकारलै साथमा छौं । हामी यही समाजका परिवार हौं । परिवारले परिवारलाई सहयोग गर्नु हामी बैंक र बैंकरको पहिलो कर्तव्य हुन जान्छ नि ।
० राज्यले बैंकका ग्राहकहरुका लागि पहिलो चरणमा ल्याएका राहतका प्योकजलाई चाहि कसरी लिनु भएको छ ?
हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । शुरुका लागि यो ठिक होला तर, परिस्थितिको अध्ययन पछि फेरि थप सुविधा ल्याउनु जरुरी देखिन्छ । यो बढेर गयो भने त अवस्था दर्दनाक हुन्छ त्यसबारे यसको रोकथाम गर्न हामी नेपाली समयमै सचेत र सजक बन्नु जरुरी मैले देखेको छु ।
० सीइओ साब बैंकहरुले चैत्र महिनामा आउने वित्तिय विवरणमा कोरोना भाईरसको असर पर्ला त ?
राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो । नआउने कुरौ भएन । तर यो समय नाफा घाटाको होइन जीवन जिउने र जनता बचाउने बेला हो । नाफा घाटा त आईरहन्छ, गइरहन्छ । तर, मानव जीवन नरहे बैंक किन चाहियो । त्यसकारण जीवन बचाउन परिवार सुरक्षीत रहनु र जनता सुरक्षित राख्ने दायित्व हामी सबै ३ करोड नेपालीकै हो नि ।
० कोरोना भाईरसको पूर्व तयारी नेपालीमा भएको देखिदैन । यसबाट कस्तो पाठ सिक्नु पर्ला त ?
समय र परिस्थितिले सिकाउने जाने परम्परा विश्वभरी र हामी कहाँ पनि छ । लकडाउन हामी कसैले देखेको र भोगेको थिएनौ तर, अहिले लकडाउन पालना गरेका छौं । सबैभन्दा पहिला देशबासीलाई राम्रो हुनुप¥यो । अनि त अरु कुरा हुने हो । स्वास्थ्य नै मुख्य कुरा हो भन्ने सोच्नु प¥यो र यसका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु प¥यो । त्यसका लागि हामी बैंक तयार छौं ।
० एडीवीले विश्वको अर्थतन्त्र ५.४ प्रतिशतमा गिरावट भएको तथ्य हालै सार्वजनिक गरेको र यसले नेपालको बैकिङ्ग प्रणालीलाई चाहि कस्तो असर पर्ला त ?
यो भविष्यले देखाउदै जाने कुरा हो । यो कति समय लम्बिने हो । त्यसमा पनि भर पर्दछ । विश्वमा अर्थतन्त्र र देशकै अर्थतन्त्र नाजुक भएपछि बैंक र वित्तिय क्षेत्रको अवस्था कस्तो हुन्छ कल्पना गर्न गाह्रो छ ।
० अन्त्यमा बैंकका लाखौ ग्राहक र नेपाली जनतालाई केही भन्नु हुन्छ ।
सबै भन्दा पहिला घर–परिवार होसियार भएर बाँचौ । रोगबाट टाढा बसौ । सूचना पालना गरौं । सबै स्वास्थ्यका कुरामा ध्यान दिउ ।
आज कोरोना भाईरसका कारण विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रको अध्ययन गरौं । त्यसकारण सरकारले गरेको लकडाउन पूर्णरुपमा पालना गरौं घरबाटै काम गरौं घरबाट वाहिर नजाउ । आफ्नो जीवनलाई बचाउने र अरुको जीवन बचाउ ।